I-Twin Pines - I-Airbnb
Wirt, Minnesota, i-United States
I-"Twin Pines" iyindawo ekahle yabavakashi abafuna indawo enhle yase-northwood ukuze "basuke kuyo yonke into" noma kunini ngonyaka. Le yindlu enkulu eyindawo efanelekile yomndeni omkhulu noma iqembu, kodwa futhi inhle kubabhangqwana abafuna ukuchitha isikhathi phakathi kwemvelo.
Izivakashi zisebenzisa indlu yonke enekhishi negumbi lokugezela eligcwele isitoko, kanye namalineni ombhede namathawula. Kunamadekhi ngemuva nangaphambili kwendlu, anezihlalo netafula elimboziwe ngemuva. Kunegceke elikhulu elilungele izingane nezilwane ezifuywayo ezingadlalela kulo. Sisanda kufaka i-inthanethi ye-hi speed ngakho kune-wifi etholwa izivakashi. Kukhona ikhabethe elincane endaweni okungenzeka ukuthi siyalisebenzisa, kodwa asikho ngaso sonke isikhathi.
Indawo yethu itholakala eHlathini laseChippewa, cishe imizuzu eyi-15 ukusuka edolobheni lekhabethe eliyiBigfork. Umgwaqo owubhuqu esikuwo unamakhabethe acishe abe ngu-6 kuwo wonke amamayela angu-8 womgwaqo. Kukhona amaphayini amakhulu amakhulu abomvu azungeze indlu negceke, futhi indawo yokuhlala iyindawo efanelekile yokubuka izinkanyezi.
Siyakujabulela ukusebenzelana nezivakashi uma sisendlini, nokho ngokuvamile ngeke sibe lapho. Izivakashi zingashayela, zithumele umbhalo, noma zithumele i-imeyili noma yimiphi imibuzo nganoma yisiphi isikhathi mayelana nendawo. Sihlala cishe ihora ukusuka lapho.
Siyakujabulela ukusebenzelana nezivakashi uma sisendlini, nokho ngokuvamile ngeke sibe lapho. Izivakashi zingashayela, zithumele umbhalo, noma zithumele i-imeyili noma yimiphi imib…